Axsaabta Mucaaradka(UCID,WADANI) Mucaaradadu Sidaa Maaha…!!!!! | Salaan Media
Axsaabta Mucaaradka(UCID,WADANI) Mucaaradadu Sidaa Maaha…!!!!!
Dhamaan waxaan salaamayaa bulshada somaliland meel ksta oo ay joogto mudanayaal iyo marwooyinba una rajaynayaa in ay ku noolaadaan barwaaqo iyo nabad.
waxaa layaaho dimuquraadiyadu waa kelmad aad u balaadhan macnaheedana aad moodo in laysku khilaafsanyahay dhinacyo badan marka laga eego,lakiin hadana waxay leedahay waxyaalo badan oo laysku waafaqsanyahay oo aan laga gudbi karin la,aanteedna aanay dimuquraadiyadu macno yeelan.
hadaba hadaan ku soo dhawaado ujeedada markaynu ka hadlaynu dowladaha ,xukuumad waloo ka jirtaaba waxay leedahay axsaab mucaarada waana asaasiyaadka nidaamka dimuquraadiga ,xukuumad markaa taaganina waxay u baahantahay axsaab mucaarada oo toosiya .
hadaba maxay tahay mucaaradadu??? si kooban waa fard ama koox ka dhiibata ra,yi siyaasadeed ama mid ku kooban qaanuun iyo tashriic gaara kuna khilaafsan xukuumada markaa jirta,mucaaradadu waa ta wax toosisa ee dhaliisha caafimaadka qabtale.
hadaynu nahay jamhuuriyada somaliland waxaynu qaadanay nidaamkaa dimuquraadiyada taas oo runtii aynu kaga horayno dowlado badan oo soo jiray,waxaynu leenahay 2 xisbi oo mucaarada (Ucid iyo wadani) kuwaas oo muhimadoodu tahay toosinta iyo tusaalaynta xukuumada talada dalka la wareegtay ee KULMIYE.
waxaa hadaba aad moodaa inay axsaabtaa mucaaradku howshoodii gabeen kuwaas oo ay ka muuqato khibradla,aan iyo is dhexyaac ,mararka qaarkoodna aykaga mashquulsanyihiinba Xaflado,socdaalo debadeed iyo magacaabis xilal aan la garanayn waxay u soo kordhinayaan.
hadaan soo qaato Xisbiga Ucid: gudoomiyaha xisbigaa mudane faysal cali iyo musharaxa madaxweynuhuba waxay ka dhamaan la,yihiin socdaalo iyo xaflado soo dhawaynayd mudo sanada muhimadahaa xafladuhuna suaali ka taagantahay waxay ku soo kordhinayaan iyo waxay kaga faaiidayaan aan ahayn in yaroo malaa lacag urursiya taas oo ay kaga mashquuleen howsha wadanka qaybtoodii.
waxaa kaloo ka muuqda is dhexyaac iyo wada socodla,aan afhayeenka xisbigaa Cali guray oo isna dhaliishiisii xukuumadu noqtay cay iyo aflagaado .
Xisbiga Wadani: runtii waa xisbi uu gudoomiye ka yahay shakhsi siyaasad degan oo macquuli waa mudane ciro,lakiin mushkiladu waxay ka taagantahay oo muuqata in garab ka midi aad moodo goosan oo keligii ku qaadayo shinbirayahow heesa, kaas oo ay horboodayaan Mr Baabuu,Cabdirashid riyaraac oo shalay xamar ka yimi iyo Mr Axmed muumin kuwaas oo dhaawac wayn kuhaya Xisbigaa ,waxaynu ogayn siday u baal mareen ee mowqifkii bulshada somaliland kaga yaabiyey ee ay ku tilmaameen shirkii london inaan laga qayb gelin waa lagu degdegay taas oo ay wax ugu dhimeen gudoomiyaha xisbigaa.
waxaan hadaba kula talinlahaa axsaabta mucaaradkaa inay si fiican u fahmaan mucaaradadu waxaytahay siiba ashakhaasta aan lahayn khibrada siyaasadeed ee ku dhexjirta kana dhex abuuraysa is dhexyaaca,
labada Gudoomiyana waxaan kula talinlahaa inay kantaroolaan oo gacanta ku qabtqaan axsaabtooda ugana digaan qolyaha aad moodo inay ku dheeraadka yihiin ee horboodaya axsaabtooda .
Guntii iyo gabagabadii waxaa muuqata inaynaan hayn axsaab mucaarada oo dhaba kana duusha siyaasad cad oo heer sare ah xukuumadana ku ilaalisa wadada toosan dheeli tirtana,lakiin waxaad mooda in yagu u baahanyihiin wax mucaaradada ku toosiya horta marka hore.
waxaana muuqata inay ku mashquulsanyihiin saqaairil umuurka sida muuqata maalmahan mushkilada ciyaartoyga kubada cagta ee Togdheer taas oo aynu odhan karno waa mas,alad masuuliinta ciyaaraha ee gobolka u taala,ugu danbayntii waxaan kula talinlahaa axsaabtaa mustawaha siyaasadda mucaaradadiina kor uqaada oo dhulka ka kiciya.